फेरि डा. गोविन्द केसीले जुम्लामा सुरु गरे अनशन - Lekhapadhee Lekhapadhee - फेरि डा. गोविन्द केसीले जुम्लामा सुरु गरे अनशन
लेखापढी २९ भाद्र २०७७, सोमबार १५:३६
काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधारको विभिन्न माग राख्दै आएका डा. गोविन्द केसीले जुम्लामा फेरि अनशन सुरु गरेका छन् । जुम्लाको चन्दननाथ–६ रानिचौरमा रहेको वाविरा मन्दिरमा उनको १९ औं सत्याग्रह जुम्लामा सुरु भएको हो ।
नेपालीहरुको नि:शुल्क गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको सुनिश्चितता र सरकारविरुद्ध जुम्लामा १९ औं सत्याग्रह सुरु गरेको डा.गोविन्द केसीले बताए ।